Ticky: Nyore, Isina kudhura SaaS Vatengi Tsigiro | Martech Zone
Svondo, Gunyana 30, 2012 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Muhurukuro yedu naFormstack neChishanu, isu tanga tichingotaura nezve maapplication makuru anoramba achirovera pamusika anopa mhinduro dzisingadhuri dzinogona kukura nebhizinesi rako. Sezvo ini ndanga ndichinyora mugadziri pane imwe nyaya yataive tiinayo ne plugin yake, ini ndakapinda muhurongwa hwetikiti hwavakange vaita, Ticky.
Kana iwe uri bhizinesi riri kukura, iyi inogona kunge iri sisitimu yakakwana yako nekuti ivo vanobhadharisa chete $ 5 pamushandisi Parizvino, iyo sisitimu inosanganiswa neEnvato, mhuri yewebhu plugin, theme uye snippet saiti, kuitira kuti vanogadzira vagone kupa rutsigiro kune vatengi vavo. Iine zvese maficha anodiwa kune diki diki rekuvandudza shopu - iine bug fixer tracker, iyo FAQ uye ruzivo-hwaro, email ziviso uye mhinduro, uye kukoshesa kwetikiti.
Ticky inosimudzira zvinotevera mabhenefiti:
Yakaiswa - Ticky inoita kuti iwe usarudze subdomain uye gadzirisa logo yako kuti ifanane neako mhando kune musono mutengi ruzivo.
Envato-inoshamwaridzika - Ticky yakagadzirirwa kusanganisa zviri nyore neEnvato, ichiita kuti zvive nyore kutsigira uye kuongorora kutenga kubva kuZuva rekutanga.
Kuchengeta nguva - Dhizaini yakachena yeTicksy uye interface inoita kuti nzira yekutsigira ive nyore uye inonzwisisika kwauri uye - zvinonyanya kukosha - vatengi vako.
Bloat-yemahara - Tarisa pakutsigira vatengi vako, kwete kubata Anwendung. Ticky inopa ekutsigira maturusi aunonyatsoda. Kwete bloatware.
Affordable - Pamadhora mashanu chete pamushandisi pamwedzi - uye hapana mari yakavanzwa - Ticky inoita kuti iwe ugone kupa stellar vatengi rutsigiro pamutengo weimwe iced vanilla latte neimwe pfuti.
dzakanaka - Diki dhibhodhi raTicky rakareruka, rinonzwisisa rinokupa maturusi ekuramba wakarongeka, kutyaira kugona uye nekupa yepamusoro-ndege vatengi.
Tags: mhinduro databaseMabatiro evatengikasitoma rutsigiroFAQruzivo ruzivotikiti rekutsigirachikwangwani